Sarkaal katirsan Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya oo lagu dilay qarax gaari gudaha Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSarkaal katirsan Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya oo lagu dilay qarax gaari gudaha Muqdisho
Sarkaal katirsan Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya oo lagu dilay qarax gaari gudaha Muqdisho. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sarkaal katirsan dowladda Soomaaliya ayaa lagu dilay qarax loogu rakibay gaarigiisa gudaha Muqdisho maanta oo Isniin ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka amniga ah iyo goobjoogayaal.
Sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Cusmaan Faarax sidoo kale loo yaqaan (Dr. Yare), kaasoo la shaqeynayay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
Dr. Yare ayaa ku geeriyooday kadib markii qarax loogu xiray kursiga darawalka gaariga uu ku qarxay isaga oo marayay meel u dhow isbitaalka Martiini ee Muqdisho, sida ay sheegeen goobjoogayaashu.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada dilka dhacay maanta oo Isniin ah, balse waxaa lagu tuhunsanyahay ururka hubaysan ee Al-Shabaab, taasoo geysatay weeraro lamid ah xilliyadii lasoo dhaafay.
Weerarka maanta oo Isniin ah ayaa imaanaya hal maalin kadib markii gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa lagu bartilmaameedsaday saraakiil sare oo ka ambabaxayay saldhig milatari oo kuyaala Muqdisho.
Ugu yaraan 15 qof oo u badan shacab ayaa lagu dilay weerarkaas.
February 12, 2017 Ugu yaraan 8 askari oo ciidamada DFS katirsan oo ku geeriyooday weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigyo milatari oo kuyaala gobolka Shabeellaha Hoose
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ciidamada maamul goboleedka Jubbaland oo ay taageerayaan ciidamada Kenya oo hoos taga howlgalka AMISOM ayaa maanta oo Talaado ah dib uga qabsaday degmada Badhaadhe maleeshiyada Al-Shabaab, sida uu sheegay wasiir. Cabdirashiid Xasan Nuur, [...]